Muqdisho:-Madaxweynaha DFKM Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka u dhooofay magaalada Adis ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Madaxweynaha DFKM Sh Shariif ayaa waxaa safarkiisa ku weheliya Ra-iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka wasaaaradda Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise, Xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidanka DFKM.
Madaxweyanha DFKM iyo wafdigiisa ayaa waxaa ay magaalada Addis ababa uga qeyb galaya shir maalinta beri ah ay ka soo qayb geli doonaa madaxda IGAD si loo meel mariyo hishiiskii ka dhacay magaalada Nairobi oo ay kala saxiixdeen DFKM , Kenya iyo Ugandha oo ahaa in dalka soomaaliya ay galaan ciidanka dalka Kenya iyadoo shirka berina dowllada Itoobiya ay shaacin doonto in ay qayb ka tahay ciidamada la doonayo in ay galaan gudaha dalka Soomaaliya.
Dowllladaha ku bahoobay IGAD ayaa doonaya in dhaqaalo badan iyo tababaro ay hellaan ciidamadooda si ay uga faa.iidaystaan colaadaha iyo dhibaatada ka dhex aloosan dadka soomaaliyeed dhexdooda iyagoo arrimahaas qayb ka ah oo sii murjinaya mar walba , Ciidamo shisheeyey ayaa dowlladaha reer Galbeedku hoos ka soo riixayaan si gabi ahaanba ula wareegaan dalka Soomaaliya iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya in ay weerar ku yihiin ururka Al-shabaab ayna doonayaan in ay xasilooni ku soo rogaan dalka Soomaaliya.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka wasaaaradda Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise, oo la hadlay saxaafada ugana waramaya u jeedadad safarkooda ayaa sheegay in u jeedadad ugu weyn ay tahay in dowllada Itoobiya iyo dalalka kale ee deriska la ah Soomaaliya ay DFKM la yeelato wada shaqayn dhinac amniga ah si ay gacan uga siiyaan la dagaalanka uruka Al-shabaab. Wafdiga madaxweynaha DFKM Sh Shariif ayaa la filayaa in 2 maalmood uu ku sugnaado dalka Itoobiya isagoo kulamo gaar gaar ah la qaadan doona madaxda Dowllada Itoobiya iyo madaxda dalalka IGAD ee ka soo qayb galaya shirka maalinta beri ah ka furmi doona dalka Itoobiya.